Xildhibaan Carabow oo ku baaqay in tirada kuraasta gobolka Banaadir laga dhigo 14 kursi - Jowhar Somali news Leader
Home News Xildhibaan Carabow oo ku baaqay in tirada kuraasta gobolka Banaadir laga dhigo...
Xildhibaan Carabow oo ku baaqay in tirada kuraasta gobolka Banaadir laga dhigo 14 kursi
Xildhibaan C/qaadir Carabow Ibraahim oo ka mid ah XIldhibaanada Golaha Shacabka ayaa hadal uu ka jeediyay maanta kulanka ay yeesheen xildhibaanada golaha shacabka waxa uu ku baaqay in xal laga gaaro maqaamka Muqdisho oo xildhibaanadu u codeeyaan.
“Maanta waa maalin weyn,maanta waa maalin taariikhi ah, xildhibaankii ogolaada in magaaladan tahay magaalo dhul Soomaali ay leedahay,dad gaar ahna leeyahay iyo kan diidan waa in la kala arkaa.”ayuu yiri xildhibaan Carabow.
Xildhibaanka ayaa ku taliyay in tirada kuraasta aqalka sare ee gobolka Banaadir laga dhigo 14 kursi isla markaana ay u codeeyaan xildhibaanada golaha shacabka.
“Waxaan soo jeedinayaa in tirada kuraasta laga dhigo illaa 14 kursi,isla markaana maqaamka Muqdisho laga dodo isla markaana cod la geliyo.’ayuu sii raaciyay xildhibaan Carabow.
Kulanka oo ah kii 7-aad ee kalfadhigiisa 7-aad ayaa waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha Golaha Shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan,waxaana goobjoog ka ah inta badan xildhibaanada golaha Shacabka.
Ajendaha kulanka ayaa ah dhamaystirka ka doodista xeerka kuraasta gobolada waqooyi iyo ka doodista xeerka matalaadda gobolka Banaadir,oo shaly si aad ah mudanayaashu ay uga doodeen,168 Xildhibaan ayaa goobjoog ah fadhiga.